यी हुन् जाडो मौसमका लागि उपयोगी खानेकुरा (भिडियाेसहित)
काठमाडौं ।यतिबेला सबैतिर जाडो बढेको छ । अहिले सबैलाई जाडोकै चिन्ता छ । जाडोले स्वास्थ्यका हिसावले पनि केहिलाई दुःख दिने गर्छ भने केही जाडो मौसममा रमाउने गर्छन् । गर्मीको तुलनामा जाडोमा हामीलाई बढी भोक लाग्छ । शरीरको रगतमा पोषणको मात्रा पर्याप्त हुँदा शरीरले तातो महसुस गर्छ । जाडोमा चिसोका कारण शरीरको तापक्रम कम हुने भएकाले रगतमा पोषणको मात्रा पर्याप्त नहुँदा शरीरले चिसो महसुस गर्छ । त्यसैले भोक धेरै लाग्छ तर, जाडोको समयमा खानेकुरामा हामी प्रायः कम ध्यान दिन्छौँ । गर्मीमा जस्तो चिसोमा खानेकुरा नबिग्रिने भनेर बासी खानेकुरा पनि प्रशस्त नै खाने गर्छौँ । यस्ता कुरामा ध्यान नदिँदा जाडोको समयमा धेरै बिरामी समेत पर्छन् ।जाडोमा बच्नका लागि कपडा लगाएर मात्र हुँदैन, मौसम अनुसार तातो खालका खानेकुरा समेत खानु पर्छ । तर, कहिलेकाँही जाडोमा शरीर तातो बनाउन खानेकुरा खाँदा उल्टै स्वास्थ्यमा हानी पुग्छ भने कतिपय यस्ता खानेकुरा पनि छन्, जसको सेवनबाट रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउनुका साथै भाइरस र रुघाखोकीबाट बच्न सकिन्छ । त्यसैले जाडोमा यस्ता खानेकुरा खानुहोस् : ﻿ १. च्याउ च्याउ सेलेनियमको राम्रो स्रोत हो । यसले स्नायु प्रणालीलाई बलियो बनाएर शरीरमा रक्तचाप बढ्न दिँदैन र रगतसम्बन्धी क्यान्सर हुनबाट रोक्न मद्दत गर्छ । चिसो मौसममा विशेषगरी च्याउको सुप बनाएर खान सकिन्छ । यसमा प्रशस्त मात्रामा पाइने खनिज पदार्थले चिसोका कारण हुने मांसपेशी दुखाइ नियन्त्रण गर्छ । तसर्थ, च्याउ बाथका रोगीका लागि फाइदाजनक हुन्छ । त्यस्तै, यसमा पाइने बिटा ग्लुकनले रगतमा सेतो रक्तकोषिका निर्माण गरि प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउन सहयोग पुर्याउँछ ।२. रायोको साग रायोको साग हिउँदमा सजिलै उपलब्ध हुने स्वादिष्ट तथा पौष्टिक आहार तरकारी हो । जुन हामी सधैं खान सक्छौँ । यो जाडो मौसमका लागि स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले समेत एकदमै लाभदायी मानिन्छ । रायोको सागमा पाइने भिटामिन ए ले चिसोयाममा बढी देखिने बाथ, कफ जस्ता रोग नियन्त्रण गर्छ । बाथका रोगीका लागि हुने हड्डी दुख्ने समस्याबाट राहत समेत मिल्छ । रायो भिटामिन सी को पनि राम्रो स्रोत भएकाले यो नियमित खाँदा रुघाखोकी लाग्दैन । साथै यसले क्यान्सर लाग्नबाट बचाउँछ । रायो फाइबरयुक्त भएकाले कलेजो र रगत दुवैलाई ‘डिटक्सिफाइ’ गर्छ र कोलेस्ट्रोलको स्तर घटाउन मद्दत गर्छ ।३.सुन्तला जाडोयाम सुन्तलाको मौसम हो । जाडोमा सुन्तला खानु अत्यावश्यक छ तर कतिपयले भने चिसो लाग्ला भनेर सुन्तला खाँदैनन् । यो गलत हो । सुन्तलामा फाइबर प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । यसले शरीरमा कोलेस्टरोलको मात्रा घटाउँछ । यस्तै सुन्तलामा पाइने फ्लाभोनोइड हेस्पेरिडिन र म्याग्नेसियमले उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रण गर्छ । सुन्तला खाँदा मिर्गौला सम्बन्धी रोग लाग्ने सम्भावना कम हुन जान्छ र पत्थरीको समस्या पनि हटाउँछ । यसमा क्यारोटेनोइड्स नामक तत्व पाइन्छ, जसले कलेजोको क्यान्सर हुनबाट जोगाउँछ । त्यस्तै सुन्तलामा बेटा–क्यारोटिन पाइन्छ । यो उत्तम एन्टी अक्सिडेन्ट हो । यसले छालालाई चम्किलो बनाउँछ । सुन्तलामा पोलिफेनोल्स जस्ता तत्व प्रशस्त मात्रामा पाइन्छन् । यी तत्वले रुघाखोकी जस्ता भाइरल इन्फेक्सनबाट जोगाउँछन् ।कब्जियतको समस्या भएकालाई सुन्तलाले दिसा खलास गर्ने काम गर्छ । यसमा फाइबरको मात्रा उच्च हुन्छ, जसले पाचन प्रक्रियालाई बलियो बनाउँछ । सुन्तलामा साइट्रस लिमोनोइड्स प्रशस्त मात्रामा पाइने भएकाले छाला, फोक्सो, स्तन, पेट र मलाशयमा हुने क्यान्सरबाट जोगाउँछ । यस्तै सुन्तलामा पोटासियम र इलेक्ट्रोलाइट मिनरल हुन्छन् । यिनले मुटुको गतिविधिलाई सुचारु राखी यसलाई स्वस्थ राख्न मद्दत पुर्याउँछन् ।४. गाँजर उज्यालो रातो रङ भएको तरकारी, गाँजरमा धेरै मात्रामा ‘बेटा क्यारोटिन’ हुन्छ । यसबाहेक गाँजर फाइबरयुक्त हुन्छ, जसले शरीरको तौल घटाउन पनि मद्दत पुर्याउँछ । गाँजरमा अधिक मात्रामा एन्टिअक्सिडेन्ट, भिटामिन ‘के’ र कोलेस्ट्रोलको मात्रा कम हुन्छ । यसले आँखा पनि स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ । त्यसैले चिसो मौसममा गाँजरलाई आफ्नो खानामा समावेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसले शरीरमा जन्मने भाइरसलाई समेत नष्ट गर्ने काम गर्छ ।५.स्याउ हाम्रो खानाको मुख्य स्रोत एन्टीअक्सिडेन्ट हो । एउटा स्याउमा १५ सय मिनिग्राम भिटामीन सि प्राप्त हुन्छ । भिटामिनले भाइरससँग लड्ने भएकाले चिसो मौसममा पर्याप्त मात्रामा स्याउ खानु राम्रो हुन्छ । स्याउले मुटु सम्बन्धी रोग घटाउनुका साथै क्यान्सरबाट समेत बचाउँछ ।६.गोलभेँडा गोलभेँडा स्वादमा मात्र नभई स्वास्थ्यका लागिसमेत उत्तिकै प्रभावकारी चिज हो । सबैजसो मौसममा उपलब्ध हुने गोलभेँडा जाडोका लागि पनि उत्तिकै फाइदाजनक छ । यसमा भिटामिन ए र सी प्रचुर मात्रामा पाइन्छ । जसले जाडोमा देखिने श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोग, छाला सुक्खा हुने जस्ता समस्या नियन्त्रण गर्छ । गोलभेँडामा पाइने ल्याइकोपिनले हाम्रो शरीरमा भएको अनावश्यक फ्याट (बोसो) कम गर्न मद्दत गर्छ । त्यसैले जाडोमा गोलभेँडा सेवन गर्नु उपयोगी मानिन्छ ।७.अण्डा अण्डा यस्तो पौष्टिक आहार हो जुन हामी दिनहुँ खान सक्छौँ । शरीरमा चाहिने महत्वपूर्ण पौष्टिक तत्वहरू जस्तै जिङ्क, प्रोटिन र आइरन अण्डामा पर्याप्त पाइन्छ । शून्य कोलेस्ट्रोल अण्डाको सेतो भागमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा हुँदैन । एउटा अण्डामा हुने १८० मिलिग्राम कोलेस्ट्रोल पहेँलो भागमा मात्रै हुन्छ । एउटा अन्डाको सेतो भागमा चार मिलिग्राम प्रोटिन हुन्छ । अण्डाको सेतो भागमा अमिलो एसिडको मात्रासमेत प्राप्त हुने भएकाले शरीरको मांसपेशीलाई सन्तुलित बनाउन मद्दत गर्छ । जसका कारण जाडोमा अण्डा बिहानको खाजामा खान उत्तम हुन्छ साथै यसलाई धेरै तरिकाले समेत खान सकिन्छ ।८. बाँसको तामा जाडोमा तामाको सुप स्वास्थ्यका लागि लाभदायी हुन्छ । यसको तरकारी, अचारसँगै सुप पनि बनाएर खान सकिन्छ । बाँसको तामाका परिकार खाँदा उच्च रक्तचाप, मुटुरोग, कोलेस्ट्रोल बढ्ने जस्ता रोग नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ । बाँसको तामामा कार्बोहाइड्रेट र फलामको मात्रा कम हुने भएकाले मधुमेह र मोटोपनका बिरामीका लागि पनि फाइदाजनक हुन्छ ।९.केरा केरा भिटामीन वी को महत्वपूर्ण स्रोत हो । केराले थकान, अवसाद, तनाव र अनिद्रा हटाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । केराले हाड बलियो बनाउँछ भने मुटु रोगबाट बचाउँदै उच्च रक्तचापबाट पनि जोगाउँछ । चिसोमा केरा खायो भने झनै चिसो हुन्छ भन्ने सोच छ तर, त्यो गलत हो । केरा खाँदा सर्दीबाट बचिन्छ ।१०.अदुवा अदुवाले शरीरमा पुर्याउने फाइदाको बारेमा प्रायः सबैलाई अवगत नै छ । यसले अपचको समस्यालाई टाढा राख्नेदेखि रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिसमेत बढाउने काम गर्छ । जाडो समयमा शरीर अस्वस्थ हुने सम्भावना भएको हुँदा अदुवाको सेवन गर्नु फाइदाजनक हुन्छ । यसलाई चिया, सुप र तरकारीमा मिसाएर सेवन गर्न सकिन्छ ।११. मेवा मेवाले पनि प्रशस्त मात्रामा भिटामीन सि उपलब्ध गराउँछ । मेवाले सुन्निने रोगहरूमा पनि उत्तिकै लाभ मिल्छ । जाडोमा प्रायः हात खुट्टा सुन्निने समस्या धेरैको हुन्छ । त्यसैले चिसोमा मेवा खान फलदायी हुन्छ ।१२. लसुन जाडोको समय लसुन सेवनको लागि उत्तम समय मानिन्छ । चिसो भगाउनका लागि लसुनलाई निकै राम्रो उपयोगी मानिन्छ । काँचो लसुनमा सेलेनियम, जम्र्यानियम र सल्फाइड्रिल अमिनो एसिड हुन्छ जसले रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउन मद्दत गर्छ । यो प्राकृतिक एन्टिबायोटिकले युरिनरी ट्रयाकट इन्फेक्सन, ब्रोन्काइटिस, निमोनियाबाट बच्न र रक्तचाप पनि घटाउन मद्दत गर्छ । साथै यसले कुनैपनि रोगको संक्रमण हुनबाट बचाउँछ भने भाइरससँग पनि लड्न सहयोग गर्दछ । चिसोपना र फ्लुले सताउँदा लसुनको सेवन गर्न जरुरी हुन्छ, जसले शरीरलाई स्वस्थ राख्छ ।१३. सखरखण्ड सखरखण्ड भिटामीन ए को महत्वपूर्ण स्रोत हो । यसमा भिटामीन इ पनि रहेको पाइन्छ । यसले रक्तकोषहरु मर्नबाट समेत जोगाउँछ । सखरखण्डको भिटामीन इ ले प्रतिरक्षात्मक प्रणालीलाई एकदमै राम्रो बनाउँछ । त्यसैले नेपाली माटो र बजारमा पर्याप्त पाइने सखरखण्ड खाएर सर्दीबाट बचौं ।१४. मेथीको साग मेथीको दाना स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ । तर, दाना मात्र नभएर मेथीको साग पनि उत्तिकै उपयोगी छ । मेथीको साग खाएमा चिसो मौसममा हुने विभिन्न संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ । मेथीको सागमा पाइने एमिनो एसिडले रगतमा चिनीको मात्रालाई नियन्त्रण गर्छ । त्यस्तै, यो नियमित खाँदा रक्तचापसमेत नियन्त्रण गर्छ । त्यसैगरी, मेथीको सागमा पाइने गेलोप्टोमाइनन् नामक तत्वले मुटुलाई स्वस्थ राख्नुका साथै शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा पनि नियन्त्रण गर्छ ।१५. अंगुर अंगुरमा पनि पर्याप्त मात्रामा भिटामीन सी पाइन्छ । अंगुरमा कोलस्ट्रोल (चिल्लो) घटाउने अरू तत्वहरू पनि मिसिएको हुन्छ । रातो अंगुर क्यान्सरका विरुद्ध लड्ने महत्वपूर्ण स्रोत पनि हो । त्यसैले जाडोमा अंगुर सेवन उपयुक्त मानिन्छ ।१६.दालचिनी, मरिच दालचिनी र मरिच क्यालसियम र आइरनको राम्रो स्रोत हो । यिनीहरुले ‘रेड ब्लड सेल’ उत्पादन र रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउन मद्दत पुर्याउँछ । दालचिनीले मधुमेहको स्तर घटाउन पनि मद्दत गर्छ । यसलाई चिया वा कफीमा हालेर पनि सेवन गर्न सकिन्छ । यस्तै मरिच चिसो मौसममा रुघा, खोकी र ज्वरोसँग लड्नका लागि उपयोगी हुन्छ । त्यसैले आफ्नो खानामा कालो मरिच समावेश गर्न आवश्यक छ ।१७. दही जाडोमा प्रायः चिसो खाने कुराहरु खान बन्द नै गर्छौ । धेरै मानिसले दहीलाई पनि खान रोक लगाउने गरेका छन् । तर जाडोमा दही खाँदाको फाइदा नै फाइदा छन् । दहीमा पाईने लैक्टोबैसिलसले जाडो मौसममा रुघा खोकीबाट बचाउन मद्दत पुर्याउँछ । त्यस्तै श्वासको रोग अर्थात अस्थमा जस्तो रोग हुनेलाई पनि दही सेवनले फाइदा पुर्याउनेछ । जाडोमा चिसो दहीको सट्टा तातो दही खानुपर्छ । जाडोमा दही खाँदा चिसो हुने हुँदा घाममा बसेर पनि सेवन गर्न सकिन्छ । यस्तै दहिमा भिटामिन र प्रोटिन पनि भरपुर हुने हुँदा अरु धेरै फाइदाहरु छन् ।दहीमा लैक्टोबैसिलस नामको निकै स्वस्थ ब्याक्टेरिया हुन्छ, जसले शरीरमा भएको खराब ब्याक्टेरियालाई नष्ट गर्न सहयोग पुर्याउँछ । त्यस्तै दहीलाई भिटामिन, पोटासियम, मैग्नीशियम र प्रोटिनको भरपुर श्रोत मानिन्छ । त्यस्तै दही सेवन गर्दा इम्यून सिस्टमलाई दह्रो बनाउन सहयोग गर्छ जसले गर्दा रुघाखोकीमा बच्न मद्दत पुर्याउँछ । दहीमा क्याल्सियम भरपुर हुने गर्दा शरीरको हड्डी मजबुत बनाउन सहयोग पुर्याउँछ । यस्तै दहीले स्क्रिनमा चमक आउनुका साथै स्वच्छ रहन पनि मद्दत गर्छ ।१८. माछा जाडो अथवा गर्मी, जुनसुकै मौसममा माछा खान सकिन्छ । तर, जाडोमा खान अझै उपयुक्त हुन्छ । यसलाई फ्राई गरेर वा सुप बनाएर खान सकिन्छ । माछामा पाइने न्युट्रोन्स, प्रोटिन, आयोडिन, मिनरल्स र भिटामिन डी मानव शरीरलाई नभई नहुने तत्व हुन् । शरीरमा यी तत्वको कमी भयो भने विभिन्न रोग लाग्न सक्छ । त्यसैले माछा खानु राम्रो हुन्छ ।माछामा ‘ओमेगा ३’ बोसोयुक्त एसिड हुन्छ । यो मानव स्वास्थ्यका लागि निकै महत्वपूर्ण तत्व हो । यसले मस्तिष्क र आँखाको रेटिना निर्माण, वृद्धि र विकासमा ठूलो भूमिका खेल्छ । नियमित माछा खाने मानिसमा मुटुको समस्या समेत कम हुन्छ । यसले मानसिक तनावबाट मुक्त हुनसमेत सहयोग गर्छ । जाडोमा माछाको सुप बनाएर खाँदा भाइरस रुघाखोकीबाट बच्न सकिन्छ ।
१४ पुष २०७७, मंगलवार १८:५६
यतिबेला सबैतिर जाडो बढेको छ । अहिले सबैलाई जाडोकै चिन्ता छ । जाडोले स्वास्थ्यका हिसावले पनि केहिलाई दुःख दिने गर्छ भने केही जाडो मौसममा रमाउने गर्छन् । गर्मीको तुलनामा जाडोमा हामीलाई बढी भोक लाग्छ । शरीरको रगतमा पोषणको मात्रा पर्याप्त हुँदा शरीरले तातो महसुस गर्छ । जाडोमा चिसोका कारण शरीरको तापक्रम कम हुने भएकाले रगतमा पोषणको मात्रा पर्याप्त नहुँदा शरीरले चिसो महसुस गर्छ । त्यसैले भोक धेरै लाग्छ तर, जाडोको समयमा खानेकुरामा हामी प्रायः कम ध्यान दिन्छौँ । गर्मीमा जस्तो चिसोमा खानेकुरा नबिग्रिने भनेर बासी खानेकुरा पनि प्रशस्त नै खाने गर्छौँ । यस्ता कुरामा ध्यान नदिँदा जाडोको समयमा धेरै बिरामी समेत पर्छन् ।
जाडोमा बच्नका लागि कपडा लगाएर मात्र हुँदैन, मौसम अनुसार तातो खालका खानेकुरा समेत खानु पर्छ । तर, कहिलेकाँही जाडोमा शरीर तातो बनाउन खानेकुरा खाँदा उल्टै स्वास्थ्यमा हानी पुग्छ भने कतिपय यस्ता खानेकुरा पनि छन्, जसको सेवनबाट रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउनुका साथै भाइरस र रुघाखोकीबाट बच्न सकिन्छ । त्यसैले जाडोमा यस्ता खानेकुरा खानुहोस् :
च्याउ सेलेनियमको राम्रो स्रोत हो । यसले स्नायु प्रणालीलाई बलियो बनाएर शरीरमा रक्तचाप बढ्न दिँदैन र रगतसम्बन्धी क्यान्सर हुनबाट रोक्न मद्दत गर्छ । चिसो मौसममा विशेषगरी च्याउको सुप बनाएर खान सकिन्छ । यसमा प्रशस्त मात्रामा पाइने खनिज पदार्थले चिसोका कारण हुने मांसपेशी दुखाइ नियन्त्रण गर्छ । तसर्थ, च्याउ बाथका रोगीका लागि फाइदाजनक हुन्छ । त्यस्तै, यसमा पाइने बिटा ग्लुकनले रगतमा सेतो रक्तकोषिका निर्माण गरि प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउन सहयोग पुर्याउँछ ।
२. रायोको साग
रायोको साग हिउँदमा सजिलै उपलब्ध हुने स्वादिष्ट तथा पौष्टिक आहार तरकारी हो । जुन हामी सधैं खान सक्छौँ । यो जाडो मौसमका लागि स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले समेत एकदमै लाभदायी मानिन्छ । रायोको सागमा पाइने भिटामिन ए ले चिसोयाममा बढी देखिने बाथ, कफ जस्ता रोग नियन्त्रण गर्छ । बाथका रोगीका लागि हुने हड्डी दुख्ने समस्याबाट राहत समेत मिल्छ । रायो भिटामिन सी को पनि राम्रो स्रोत भएकाले यो नियमित खाँदा रुघाखोकी लाग्दैन । साथै यसले क्यान्सर लाग्नबाट बचाउँछ । रायो फाइबरयुक्त भएकाले कलेजो र रगत दुवैलाई ‘डिटक्सिफाइ’ गर्छ र कोलेस्ट्रोलको स्तर घटाउन मद्दत गर्छ ।
जाडोयाम सुन्तलाको मौसम हो । जाडोमा सुन्तला खानु अत्यावश्यक छ तर कतिपयले भने चिसो लाग्ला भनेर सुन्तला खाँदैनन् । यो गलत हो । सुन्तलामा फाइबर प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । यसले शरीरमा कोलेस्टरोलको मात्रा घटाउँछ । यस्तै सुन्तलामा पाइने फ्लाभोनोइड हेस्पेरिडिन र म्याग्नेसियमले उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रण गर्छ । सुन्तला खाँदा मिर्गौला सम्बन्धी रोग लाग्ने सम्भावना कम हुन जान्छ र पत्थरीको समस्या पनि हटाउँछ । यसमा क्यारोटेनोइड्स नामक तत्व पाइन्छ, जसले कलेजोको क्यान्सर हुनबाट जोगाउँछ । त्यस्तै सुन्तलामा बेटा–क्यारोटिन पाइन्छ । यो उत्तम एन्टी अक्सिडेन्ट हो । यसले छालालाई चम्किलो बनाउँछ । सुन्तलामा पोलिफेनोल्स जस्ता तत्व प्रशस्त मात्रामा पाइन्छन् । यी तत्वले रुघाखोकी जस्ता भाइरल इन्फेक्सनबाट जोगाउँछन् ।
कब्जियतको समस्या भएकालाई सुन्तलाले दिसा खलास गर्ने काम गर्छ । यसमा फाइबरको मात्रा उच्च हुन्छ, जसले पाचन प्रक्रियालाई बलियो बनाउँछ । सुन्तलामा साइट्रस लिमोनोइड्स प्रशस्त मात्रामा पाइने भएकाले छाला, फोक्सो, स्तन, पेट र मलाशयमा हुने क्यान्सरबाट जोगाउँछ । यस्तै सुन्तलामा पोटासियम र इलेक्ट्रोलाइट मिनरल हुन्छन् । यिनले मुटुको गतिविधिलाई सुचारु राखी यसलाई स्वस्थ राख्न मद्दत पुर्याउँछन् ।
उज्यालो रातो रङ भएको तरकारी, गाँजरमा धेरै मात्रामा ‘बेटा क्यारोटिन’ हुन्छ । यसबाहेक गाँजर फाइबरयुक्त हुन्छ, जसले शरीरको तौल घटाउन पनि मद्दत पुर्याउँछ । गाँजरमा अधिक मात्रामा एन्टिअक्सिडेन्ट, भिटामिन ‘के’ र कोलेस्ट्रोलको मात्रा कम हुन्छ । यसले आँखा पनि स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ । त्यसैले चिसो मौसममा गाँजरलाई आफ्नो खानामा समावेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसले शरीरमा जन्मने भाइरसलाई समेत नष्ट गर्ने काम गर्छ ।
हाम्रो खानाको मुख्य स्रोत एन्टीअक्सिडेन्ट हो । एउटा स्याउमा १५ सय मिनिग्राम भिटामीन सि प्राप्त हुन्छ । भिटामिनले भाइरससँग लड्ने भएकाले चिसो मौसममा पर्याप्त मात्रामा स्याउ खानु राम्रो हुन्छ । स्याउले मुटु सम्बन्धी रोग घटाउनुका साथै क्यान्सरबाट समेत बचाउँछ ।
गोलभेँडा स्वादमा मात्र नभई स्वास्थ्यका लागिसमेत उत्तिकै प्रभावकारी चिज हो । सबैजसो मौसममा उपलब्ध हुने गोलभेँडा जाडोका लागि पनि उत्तिकै फाइदाजनक छ । यसमा भिटामिन ए र सी प्रचुर मात्रामा पाइन्छ । जसले जाडोमा देखिने श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोग, छाला सुक्खा हुने जस्ता समस्या नियन्त्रण गर्छ । गोलभेँडामा पाइने ल्याइकोपिनले हाम्रो शरीरमा भएको अनावश्यक फ्याट (बोसो) कम गर्न मद्दत गर्छ । त्यसैले जाडोमा गोलभेँडा सेवन गर्नु उपयोगी मानिन्छ ।
अण्डा यस्तो पौष्टिक आहार हो जुन हामी दिनहुँ खान सक्छौँ । शरीरमा चाहिने महत्वपूर्ण पौष्टिक तत्वहरू जस्तै जिङ्क, प्रोटिन र आइरन अण्डामा पर्याप्त पाइन्छ । शून्य कोलेस्ट्रोल अण्डाको सेतो भागमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा हुँदैन । एउटा अण्डामा हुने १८० मिलिग्राम कोलेस्ट्रोल पहेँलो भागमा मात्रै हुन्छ । एउटा अन्डाको सेतो भागमा चार मिलिग्राम प्रोटिन हुन्छ । अण्डाको सेतो भागमा अमिलो एसिडको मात्रासमेत प्राप्त हुने भएकाले शरीरको मांसपेशीलाई सन्तुलित बनाउन मद्दत गर्छ । जसका कारण जाडोमा अण्डा बिहानको खाजामा खान उत्तम हुन्छ साथै यसलाई धेरै तरिकाले समेत खान सकिन्छ ।
८. बाँसको तामा
जाडोमा तामाको सुप स्वास्थ्यका लागि लाभदायी हुन्छ । यसको तरकारी, अचारसँगै सुप पनि बनाएर खान सकिन्छ । बाँसको तामाका परिकार खाँदा उच्च रक्तचाप, मुटुरोग, कोलेस्ट्रोल बढ्ने जस्ता रोग नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ । बाँसको तामामा कार्बोहाइड्रेट र फलामको मात्रा कम हुने भएकाले मधुमेह र मोटोपनका बिरामीका लागि पनि फाइदाजनक हुन्छ ।
केरा भिटामीन वी को महत्वपूर्ण स्रोत हो । केराले थकान, अवसाद, तनाव र अनिद्रा हटाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । केराले हाड बलियो बनाउँछ भने मुटु रोगबाट बचाउँदै उच्च रक्तचापबाट पनि जोगाउँछ । चिसोमा केरा खायो भने झनै चिसो हुन्छ भन्ने सोच छ तर, त्यो गलत हो । केरा खाँदा सर्दीबाट बचिन्छ ।
अदुवाले शरीरमा पुर्याउने फाइदाको बारेमा प्रायः सबैलाई अवगत नै छ । यसले अपचको समस्यालाई टाढा राख्नेदेखि रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिसमेत बढाउने काम गर्छ । जाडो समयमा शरीर अस्वस्थ हुने सम्भावना भएको हुँदा अदुवाको सेवन गर्नु फाइदाजनक हुन्छ । यसलाई चिया, सुप र तरकारीमा मिसाएर सेवन गर्न सकिन्छ ।
मेवाले पनि प्रशस्त मात्रामा भिटामीन सि उपलब्ध गराउँछ । मेवाले सुन्निने रोगहरूमा पनि उत्तिकै लाभ मिल्छ । जाडोमा प्रायः हात खुट्टा सुन्निने समस्या धेरैको हुन्छ । त्यसैले चिसोमा मेवा खान फलदायी हुन्छ ।
जाडोको समय लसुन सेवनको लागि उत्तम समय मानिन्छ । चिसो भगाउनका लागि लसुनलाई निकै राम्रो उपयोगी मानिन्छ । काँचो लसुनमा सेलेनियम, जम्र्यानियम र सल्फाइड्रिल अमिनो एसिड हुन्छ जसले रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउन मद्दत गर्छ । यो प्राकृतिक एन्टिबायोटिकले युरिनरी ट्रयाकट इन्फेक्सन, ब्रोन्काइटिस, निमोनियाबाट बच्न र रक्तचाप पनि घटाउन मद्दत गर्छ । साथै यसले कुनैपनि रोगको संक्रमण हुनबाट बचाउँछ भने भाइरससँग पनि लड्न सहयोग गर्दछ । चिसोपना र फ्लुले सताउँदा लसुनको सेवन गर्न जरुरी हुन्छ, जसले शरीरलाई स्वस्थ राख्छ ।
सखरखण्ड भिटामीन ए को महत्वपूर्ण स्रोत हो । यसमा भिटामीन इ पनि रहेको पाइन्छ । यसले रक्तकोषहरु मर्नबाट समेत जोगाउँछ । सखरखण्डको भिटामीन इ ले प्रतिरक्षात्मक प्रणालीलाई एकदमै राम्रो बनाउँछ । त्यसैले नेपाली माटो र बजारमा पर्याप्त पाइने सखरखण्ड खाएर सर्दीबाट बचौं ।
१४. मेथीको साग
मेथीको दाना स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ । तर, दाना मात्र नभएर मेथीको साग पनि उत्तिकै उपयोगी छ । मेथीको साग खाएमा चिसो मौसममा हुने विभिन्न संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ । मेथीको सागमा पाइने एमिनो एसिडले रगतमा चिनीको मात्रालाई नियन्त्रण गर्छ । त्यस्तै, यो नियमित खाँदा रक्तचापसमेत नियन्त्रण गर्छ । त्यसैगरी, मेथीको सागमा पाइने गेलोप्टोमाइनन् नामक तत्वले मुटुलाई स्वस्थ राख्नुका साथै शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा पनि नियन्त्रण गर्छ ।
अंगुरमा पनि पर्याप्त मात्रामा भिटामीन सी पाइन्छ । अंगुरमा कोलस्ट्रोल (चिल्लो) घटाउने अरू तत्वहरू पनि मिसिएको हुन्छ । रातो अंगुर क्यान्सरका विरुद्ध लड्ने महत्वपूर्ण स्रोत पनि हो । त्यसैले जाडोमा अंगुर सेवन उपयुक्त मानिन्छ ।
दालचिनी र मरिच क्यालसियम र आइरनको राम्रो स्रोत हो । यिनीहरुले ‘रेड ब्लड सेल’ उत्पादन र रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउन मद्दत पुर्याउँछ । दालचिनीले मधुमेहको स्तर घटाउन पनि मद्दत गर्छ । यसलाई चिया वा कफीमा हालेर पनि सेवन गर्न सकिन्छ । यस्तै मरिच चिसो मौसममा रुघा, खोकी र ज्वरोसँग लड्नका लागि उपयोगी हुन्छ । त्यसैले आफ्नो खानामा कालो मरिच समावेश गर्न आवश्यक छ ।
जाडोमा प्रायः चिसो खाने कुराहरु खान बन्द नै गर्छौ । धेरै मानिसले दहीलाई पनि खान रोक लगाउने गरेका छन् । तर जाडोमा दही खाँदाको फाइदा नै फाइदा छन् । दहीमा पाईने लैक्टोबैसिलसले जाडो मौसममा रुघा खोकीबाट बचाउन मद्दत पुर्याउँछ । त्यस्तै श्वासको रोग अर्थात अस्थमा जस्तो रोग हुनेलाई पनि दही सेवनले फाइदा पुर्याउनेछ । जाडोमा चिसो दहीको सट्टा तातो दही खानुपर्छ । जाडोमा दही खाँदा चिसो हुने हुँदा घाममा बसेर पनि सेवन गर्न सकिन्छ । यस्तै दहिमा भिटामिन र प्रोटिन पनि भरपुर हुने हुँदा अरु धेरै फाइदाहरु छन् ।
दहीमा लैक्टोबैसिलस नामको निकै स्वस्थ ब्याक्टेरिया हुन्छ, जसले शरीरमा भएको खराब ब्याक्टेरियालाई नष्ट गर्न सहयोग पुर्याउँछ । त्यस्तै दहीलाई भिटामिन, पोटासियम, मैग्नीशियम र प्रोटिनको भरपुर श्रोत मानिन्छ । त्यस्तै दही सेवन गर्दा इम्यून सिस्टमलाई दह्रो बनाउन सहयोग गर्छ जसले गर्दा रुघाखोकीमा बच्न मद्दत पुर्याउँछ । दहीमा क्याल्सियम भरपुर हुने गर्दा शरीरको हड्डी मजबुत बनाउन सहयोग पुर्याउँछ । यस्तै दहीले स्क्रिनमा चमक आउनुका साथै स्वच्छ रहन पनि मद्दत गर्छ ।
जाडो अथवा गर्मी, जुनसुकै मौसममा माछा खान सकिन्छ । तर, जाडोमा खान अझै उपयुक्त हुन्छ । यसलाई फ्राई गरेर वा सुप बनाएर खान सकिन्छ । माछामा पाइने न्युट्रोन्स, प्रोटिन, आयोडिन, मिनरल्स र भिटामिन डी मानव शरीरलाई नभई नहुने तत्व हुन् । शरीरमा यी तत्वको कमी भयो भने विभिन्न रोग लाग्न सक्छ । त्यसैले माछा खानु राम्रो हुन्छ ।
माछामा ‘ओमेगा ३’ बोसोयुक्त एसिड हुन्छ । यो मानव स्वास्थ्यका लागि निकै महत्वपूर्ण तत्व हो । यसले मस्तिष्क र आँखाको रेटिना निर्माण, वृद्धि र विकासमा ठूलो भूमिका खेल्छ । नियमित माछा खाने मानिसमा मुटुको समस्या समेत कम हुन्छ । यसले मानसिक तनावबाट मुक्त हुनसमेत सहयोग गर्छ । जाडोमा माछाको सुप बनाएर खाँदा भाइरस रुघाखोकीबाट बच्न सकिन्छ ।
उपयोगी खानेकुरा, स्वास्थ्यविशेष
Prev‘बालुवा पेलेर तेल निक्लनु र ओली सुध्रनु एकै हो : माधवकुमार नेपाल (भिडियाेसहित)
केन्द्रबिन्दु बुलेटिन : सरकारविरुद्ध नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समुहद्वारा देशभर विरोध प्रदर्शन (भिडियोसहित)Next